आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद: दोश्रो दिनको हक्कीमा पुलिस र आर्मी विजयी — Paschimnews.com News From Nepal
प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लवले धेरै पेनाल्टी कर्नर पाए पनि अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन । पुलिसले ७ र गण्डकी प्रदेशले दुई पेनाल्टी कर्नर पाएको पिन्टुले जानकारी दिए । पुलिस क्वलमा ५ नं. प्रदेशको तर्फबाट खेलिसकेका सात जना खेलाडी समावेश रहेका छन् ।
दोस्रो खेलमा नेपाल आर्मी प्रदेश नं. २ बिरुद्ध १–० को अन्तरले विजयी भएको हो । आर्मीका तर्फबाट १० नम्बर जर्सीका खेलाडी राम शाहले ५६ मिनेटमा गोल गरी टिमलाई विजयी बनाएका हुन् ।
गोललाई मान्यता दिने विषयमा विवाद भएपछि प्रदेश २ खेलबाट बाहिरिएको थियो । खेलमा आर्मीले ८ वटा कर्नर पेलान्टीको अवसर पाएको थियो । बिहीबारको तेस्रो खेल अपरान्ह ४ बजेपछि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच हुने छ।
नेपालगन्जमा फेन्सिङ जारी
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत चौथो फेन्सिङ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता बिहीबारदेखि नेपालगन्जमा सुरु भएको छ ।
नेपालगन्ज रंगशाला परिसरको कबर्ड हलमा जारी प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ र प्रदेश १ का २४–२४ जना खेलाडी सहभागी छन् ।
प्रदेश ३ बाट १२, गण्डकी प्रदेशबाट १२, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६ र नेपाल पुलिस क्लबबाट २ जना खेलाडी मात्र सहभागी भएका छन् । कर्णाली र प्रदेश ५ वाहेकका १३० जना खेलाडी सहभागी छन् । महिला र पुरुष फेन्सिङका खेल जारी छन्।